Arzantina: Manao izay hanakatonana bolongana ny vondrona media Clarín · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2009 8:08 GMT
Volana vitsivitsy lasa izay ny Global Voices no namoaka lahatsoratra miresaka momba ny vondrona fampahalalam-baovao marolafy arzantina hoe Clarín izay nanery ny YouTube hanakatona ireo mpikambana mampiasa ny rakikira an-tsary avy amin'ny programany vaovao ka mampiasa ireny ho toy ny hoe azy ny rakikira, nefa ny ankamaroany dia mitsikera ny vondronasa Clarín. Ankehitriny, manomboka manenjika ny bolongana Qué Te Pasa Clarín? [es] (Inona no mahazo anao ry Clarín), izay mitsikera ny fomba fampitany vaovao, araka ny lalàna indray io vondronasa io.
Manery ny bolongana hikatona ity fitoriana ity noho ny filazana ny nikitikitihany marika voapetraka. Mikatona, farafaharatsiny vonjimaika, ny bolongana ankehitriny noho ny mety hisian'ny fitakiana onitra na sazy ekonomika hafa ataon'ny rafi-pitsarana Arzantina aminy. Na izany aza dia mihevitra nympamaham-bolongana Arzantina fa antony hafa no nametrahana fitoriana.
Araka ny filazan'ny mpanangana ny bolongana Inona no mahazo anao ry Clarín? [es], dia notazonina ny pejy ankapobeny, tsy nalefa an-tserasera ny ambiny “noho ny fitoriana nataon'ny iray amin'ny orinasa mandrafitra ny vondrona Clarín tamin'ny bolongana sy ny fanerena mahazo azy ireo hametra ny fidiana amin'ny votoaty rehetra nivoaka nandritra ny telo volana farany.”
Nilaza ny bolongana ALT1040 [es], fa “nitaky ny hanakatonana ny bolongana ny vondrona (Clarín) satria marika voapetraka ny teny hoe Clarín ka tsy misy olon-kafa mahazo mampiasa azy ho sehatra. Ny antony mazava dia ny hampangina mpanao gazety iray mpitsikera azy ireo.” Ao amin'ny bolongana Mundo Perverso [es], no anoratan'i Diego F. :
Ny olana dia nanapa-kevitra ny handeha lavitra kokoa noho ny ady amin'ny bolongana ireto tompomenakely ireto ka maneritery amin'ny alalan'ny fitsarana sy mandrahondrahona ihany koa hanakatona ny vohikala. Araka ny hamakiana azy dia hita fa mandady ny trambon'ny sivana. Enjehin'izy ireo noho ny fahefany ara-toe-karena sy ny fananany ekipana mpisolovava izay mitatitra ny fihoaram-pahefana ataon'izy ireo.
Nanokatra bolongana vaovao antsoina hoe Guotpasshornet [es] indray ireo nanangana ny Inona no mahazo anao ry Clarín? hanangonany izay fiantraikan'ity raharaha ity, toy ny rohin'ireo vohikala hafa miresaka momba ity lohahevitra ity. Efa misy lisitra lava dia lava voarindra moa ary mbola hiampy isan'andro izany.
Niainga avy tamin'ny fifandraisana marisarisa nisy teo amin'ny governemanta arzantina sy ny vondrona Clarín moa ny anaran'ny bolongana. Ny fehezantenin'ny filoha teo aloha Néstor Kirchner nandritra ny kabary nilazany ny tsy fankasitrahany ny fomba fitateran'ny gazetin'ny Clarín ny fitantanan'ny governemantan'ny vadiny Cristina Fernández de Kirchner manao hoe, “Inona no mahazo anao ry Clarín, Sorena angaha ianao?” no nakana ny anaran'io bolongana io.